Ama-Mag Amangalisayo - Ikhasi 239
Ifomula Yokukhula Kwemisipha Ethuthukisa Imisipha Yakho
Ukwakha umzimba wendoda ozacile kudinga umsebenzi onzima nokuzibophezela, nokho imiklomelo yomzimba onjalo endodeni ihlala njalo. Ngeke ubhekwe “njengowesilisa we-alpha” kuphela lapho ufeza lolo hlobo lomzimba, nokho uzophinde…
UPALOMA FEVI'S SCOPE OF LA
I-LA Scope iwuchungechunge lwewebhu olunikeza izethameli ezihlukile. Idalwe futhi yakhiqizwa yi-TALHM Entertainment, i-LA Scope ingumbukiso wemizuzu engamashumi amabili osakazwa ezimotweni ze-rideshare. Okuqukethwe kubuyekeza amakhasimende e-rideshare kwakamuva kumakhonsathi, ithiyetha, amafestivali, imidlalo yamahlaya, ukuvulwa kwezindawo zokudlela e...
I-PET Scan ne-CT Scan: Wazi Umehluko
Abantu abaningi basadidekile ngama-CT scans nama-PET scan. Nakuba bengase basebenzise imishini ebukeka ngendlela efanayo, babonisa umehluko ohlukahlukene endleleni esebenza ngayo, imiphumela abayikhiqizayo nezinye izinto. I-CT scan imele i-Computerized Tomography, kanti i-PET imele...
Ukuhlanzeka Kwasemsebenzini: Izindlela Ezi-3 Indawo Yokusebenzela Ethonya Impilo Yethu
Ekhaya, yithina esiphethe inhlanzeko nenhlanzeko. Sinquma ukuthi kaningi kangakanani ukuhlanza ikhishi negumbi lokugezela nokuthi yimiphi imithetho yokuhlanzeka okufanele ibekwe. Nokho, emsebenzini okuningi kwalokhu akukho ezandleni zethu. Sithembele kubaqashi kanye…
Izindlela eziyi-8 zeBlockchain Technology Zingavuselela Imboni Yezokuvakasha
by I-Tripti R
Ubuchwepheshe beBlockchain, obekufanele buvikele ukuthengiselana kwe-bitcoin, buphazamisa cishe yonke imboni esiyaziyo. Ubuchwepheshe beBlockchain buseduze kakhulu. Wonke umuntu wesibili ukhuluma nge-blockchain noma uhlela ukutshala imali ekuthuthukisweni kwe-blockchain. Zonke izimboni zibheke ngabomvu ukuhlola…
5 Imikhuba Yengane Yokuthuthukisa Impilo Yakho Ekolishi
by Ukubuyisela H
Abantu abadala abasha baphila impilo ematasa futhi elawulwayo. Izibopho zabafundi basekolishi zihlanganisa imithetho elandelayo, ngezinye izikhathi ngisho nokusebenza nokunakekela izingane. Uma ucabanga ngempilo yakho ematasatasa njengamanje, uyabona ukuthi ukucindezeleka okuhlobene nemithwalo yemfanelo yabantu abadala kungaba yingozi kuwe...
Amathiphu Okunakekelwa Kweposi Okubuyisela Idolo Okufanele Kulandelwe
Uma wena noma othile omthandayo eke wahlinzwa esikhundleni samadolo kubaluleke kakhulu ukunakekela amadolo akho ngemva kokuhlinzwa emasontweni ambalwa noma izinyanga ezimbalwa zokuqala. Inqobo nje uma isiguli sisesibhedlela ngemuva kokuhlinzwa ezimbalwa…
5 Amaphutha Ajwayelekile Ezobuchwepheshe Ukuqalisa Kwakho Okufanele Uwagweme
Ukuqala inkampani kuyinto ethokozisayo kodwa eyinselele. Amaphutha athile angase asho inhlekelele. Amanye amaphutha amabi kakhulu aqhamuka endleleni osebenzisa ngayo ubuchwepheshe bebhizinisi lakho. Noma ngabe uwazi kangakanani imboni yakho, ukungayiqondi kahle i-IT kungasho ukumosha okukhulu…
5 Izindawo Eziqabulayo Zabavakashi BasePakistan Okufanele Uzivakashele Ngo-2018
IPakistan igcwele izindawo ezinhle neziqabulayo. Kodwa-ke, umbono omuhle wezindawo eziningi ezinhle zasePakistan awukhanyiswanga njengoba uhlangothi olumnyama lwasePakistan lukhonjiswa kaningi kwabezindaba. Noma kunjalo, minyaka yonke abantu bahlola…
Amagajethi Aphezulu Owafuna Ohambweni Lwakho Olulandelayo
Ingabe unomkhiqizo owuthandayo ongahamba nawo ngaso sonke isikhathi uma usohambeni? Nakanjani, unayo. Ukuhamba kwabafundi kuba okudumile usuku nosuku. Abashayeli abasebasha abanesifiso sokuvelela bapakisha izikhwama zabo ngaphandle kokungabaza yonke imizuzu yamahhala ababa nayo ngemva kokufunda. Kungani kungenjalo?…
Previous 1 ... 237 238 239 240 241 ... 385 Olandelayo